greetings from Min Htun Zaw
Myanmar IT Resource Forum » ACTIVITIES » » Introduction » greetings from Min Htun Zaw
1 greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 6:30 pm
MITR အသင်းသားများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်က မင်းထွန်းဇော်ပါ။
ဒီနေ့နေ့လည်ကပဲ ဘားကမ့်မှာ attacker နဲ့ $ƴǩǾ တို့ ပြောသွားတာကို နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Myanmar IT Resources ဆိုတဲ့ နာမည် အတိုင်းပဲ IT resource တွေကို တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင် ကြိုးစားပေးထားတာတွေ့ရတာ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မြန်မာတွေအားလုံးကိုယ်စားလည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း MITR မှာ active member တစ်ယောက်အနေနဲ့ contribute လုပ်သွားချင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ member ၀င်ပြီးသွားပါပြီ။
ကျွန်တော့် အကြောင်း နည်းနည်းမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်က networking လေ့လာပါတယ်။ construction company တစ်ခုမှာ network admin အနေနဲ့ တစ်နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ MCSE ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပေမယ့် MCP ပဲဖြေဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ programming လည်း စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့ သင်တန်းတစ်ခုနှစ်ခု တက်ပြီး နည်းနည်းလေ့လာဖူးပါတယ်။ အခုတော့ programming နဲ့ပဲ career ကို ဆက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ junior programmer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်စ၀င်တာ သုံးလလောက်ရှိပါပြီ။ programming စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်လုပ်တာမှန်ပေမယ့် programming ကို ရေရေလည်လည် မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ ဖြည့်စရာတွေက အတော်များနေတော့ အလုပ်မှာလည်း တစ်ခါတစ်ခါ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "keep smiling no matter what" လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပြီးခရီးဆက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ် adventure မှာ MITR က အထောက်အကူအများကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှကိုလည်း MITR အသင်းသားအားလုံးအတွက် ပြန်လည် contribute လည်းလုပ်သွားမှာပါ။
That's all for now, everybody. It's really nice to beapart of MITR. :cheer
2 Re: greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 6:58 pm
ကျွန်တော်လည်း programming ပိ်ုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ဒါပေမယ့်ဆရာလိုနေတယ်ဗျာ
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်ဆရာလုပ်ပါလား ဟီး
မြန်မာအိုင်တီ Resources မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏ လာပါ အမြဲတမ်း Welcome :cheer :attention
3 Re: greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 7:13 pm
Hacker-Fighter ရဲ့ g-talk account ပေးပါလား။ နောက်တွေ့ဖြစ်ရင် ပြောလို့ရအောင်ပါ။ ခုတော့ မိုးချုပ်နေလို့ အိမ်ပြန်ရဦးမယ်။
4 Re: greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 7:23 pm
5 Re: greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 7:52 pm
အခုလိုမျိုး Contribute လုပ်ပေးမယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် နောနော်လိုပြောရင် အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိပြီးတော့ Rကြီးလိုမျိုး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ
6 Re: greetings from Min Htun Zaw on 24th January 2010, 8:11 pm
Min Htun Zaw wrote: MITR အသင်းသားများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်က မင်းထွန်းဇော်ပါ။
JP ဖြစ်နေလို့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့။အခုကျော်ကြားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Software Developer တွေအားလုံးကအဲဒိအဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့သူတွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက အသက်နည်းနည်းကြီးလာမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတာဆိုတော့အားငယ်စရာလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမယ့်အားမလျှော့လိုက်
ပါနဲ့။အရာအရာအားလုံးဟာ အစပိုင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Programmer ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြိး
တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။စက်ကိုလူလိုနားလည်နိုင်အောင် ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်ရမှာလေ။ပျော်စရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သက်ရှိနဲ့ သက်မဲ့ကွာသွားတာလေး
တစ်ခုပါ။သူ့ကိုသာသေချာချုပ်ကိုင်နိုင်ရင် ဟင်း ဟင်း ဟင်း............
7 Re: greetings from Min Htun Zaw on 25th January 2010, 8:51 am
မင်မင်တွေ မော်မော်တွေ အားလုံးနှုတ်ဆက်ကြပြီးပြီဆိုတော့
နောက်လည်း Programming နဲ့ပတ်သက်လို့ မသိတာတွေရှိရင်မေးမယ်နော်
8 Re: greetings from Min Htun Zaw on 25th January 2010, 2:34 pm
Min Htun Zaw wrote: နောက်ပိုင်းမှာ programming လည်း စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့ သင်တန်းတစ်ခုနှစ်ခု တက်ပြီး နည်းနည်းလေ့လာဖူးပါတယ်။ အခုတော့ programming နဲ့ပဲ career ကို ဆက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ junior programmer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်စ၀င်တာ သုံးလလောက်ရှိပါပြီ။ programming စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်လုပ်တာမှန်ပေမယ့် programming ကို ရေရေလည်လည် မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ ဖြည့်စရာတွေက အတော်များနေတော့ အလုပ်မှာလည်း တစ်ခါတစ်ခါ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "keep smiling no matter what" လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပြီးခရီးဆက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ် adventure မှာ MITR က အထောက်အကူအများကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှကိုလည်း MITR အသင်းသားအားလုံးအတွက် ပြန်လည် contribute လည်းလုပ်သွားမှာပါ။
ဟင့် JP တောင်ဖြစ်နေပြီဘဲ။ ဘာတွေ အားငယ်နေမှာလဲ။ ဆက်လက်ကြိုးစားတက်လှမ်းသွားရင် အိုကေမှာ စိုပြေနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တောင် ဘာမှ မဖြစ်သေးလို့
ကူညီမယ်ကြားသိရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်ဗျာ။
ပြောမယ့်သာပြောရတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့က အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မှတ်မိဘူးရယ်။ ဘယ်နားထိုင်တယ် ၊ ဘာလာပြောတယ်လေး ပြောမှ မှတ်မိမှာ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ရဲ့ Career Life ကလည်း Programming or something နဲ့ဘဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့လျှောက်ဆက်သွယ်စရာတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ခင်တတ်ပါတယ်။
9 Re: greetings from Min Htun Zaw on 25th January 2010, 8:08 pm
မင်္ဂလာပါဗျာ .. ကျနော်လည်း လာရောက်ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ..
10 Re: greetings from Min Htun Zaw on 29th January 2010, 6:45 pm
gtalk account ကို PM ပို့ထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ Hacker-Fighter။ အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတာနဲ့ MITR ကို လာချင်ပေမယ့် မလာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ တစ်ပတ်လောက်တောင်ရှိသွားပြီဗျ။ PM စစ်ပြီးတာနဲ့ invite လုပ်လိုက်ပါမယ်။
အခြားသူတွေလဲ gtalk account PM ပို့ပေးမယ်ဆိုရင် နောက်တွေ့ရင် စကားပြောလို့ရတာပေါ့။ အခုတလောကတော့ online တက်ဖို့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တောင် တော်တော်လေးလုပ်ယူနေရတယ်။ invite လုပ်တာ နောက်ကျသွားရင်တော့ သည်းခံပေးကြပါ။
ဒီက admin တွေကတော့ contribute လုပ်ချင်တယ်ပြောလို့ အဟုတ်မှတ်ပြီး နောနော်လိုတစ်မျိုး အာကြီးလိုတစ်ဖုံ ကြိုဆိုနေကြပါလား။ တကယ် active member တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့ဗျာ။ လာဖြစ်အောင်တော့လာပါ့မယ်။ နက်ဖြန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ ပေါ့။
ဒါနဲ့ alt.332 က မှားနေတယ်နော်။ အာကြီးက မင်္ဂလာဘား လို့ နှုတ်ဆက်တာ။ သေချာပြန်နားထောင်ကြည့်ဦး။
အသဲကွဲလူသားကိုလည်း အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ဒါနဲ့ ko heart-broken က professional developer လားခင်ဗျ။ (ko heart-broken လို့ ခေါ်မယ်နော် ... ဖြစ်တယ်မှတ်လား ။ ပြီးတော့ ဟင်း ဟင်း ဟင်း နဲ့ ဂျပန်စက်ရုပ်နဲ့ စပ်ဆက်ပုံလေးလဲ အားလုံးသိရအောင် နည်းနည်းလောက်တော့ လင်းပေးပါလား။ ကျွန်တော့်လို နည်းနည်းဝေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။
မသိတာတွေရှိရင် မေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်း သိတာဆိုရင်ပြောပြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ မသိတာကများနေသေးတဲ့အတွက် မေးမယ့်သူတွေကို အားတော့နာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ထက် ဒီက ko heart-broken တို့က ပိုသိမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း မေးကြပေါ့။
11 Re: greetings from Min Htun Zaw on 29th January 2010, 6:51 pm
12 Re: greetings from Min Htun Zaw